China Iju Mmiri China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iju Mmiri - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Iju Mmiri)
Ọkụ Mmiri Iju Mmiri anyị na-agbapụta na-anwụ anwụ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ mmiri. Enweghi ikuku infrared, ọ bụghị igwe radieshon, ọ dịghị mmetụta ọ bụla. Mmiri Mmiri 400 a nke Watt nwere nnukwu ndụ dị elu mgbe ọ ka na-arụ ọrụ ike. Iju Mmiri 400w dị mfe ịwụnye na mfe ịnọgide na-enwe. Ọdịdị ihu igwe dị ogo 120....
400W Iju Mmiri Light Fixtures 5000K Day White
Mmiri Igwe Mmiri nke Mmiri mmiri 400 a bụ 52,000lm na nha 1500W Halogen Bulb. Mmiri Iju Mmiri ahụ enye gị ọkwa zuru oke nke ogo 120 nke na-arụ ọrụ dịka Iju Mmiri ọdịdị nke azụ maka azụ . Mgbanwe nju mmiri anyị na- enye gị ìhè karịa ma chekwaa pasent 80 nke ụgwọ iwu ọkụ eletrik gị. Ebe obibi ọkụ a E wuru ya na 100%...
Iju Mmiri Led Iju Mmiri Iju Mmiri 500w Mmiri Iju Mmiri Iju mmiri 80w 12V Buru Iju Mmiri Ngwurugwu Iju Mmiri Ìhè Iju Mmiri 240v